गायिका ललिताको दोष दुईमा के छ ? (भिडियो सहित) - Dainik Nepal
गायिका ललिताको दोष दुईमा के छ ? (भिडियो सहित)
दैनिक नेपाल २०७३ चैत ७ गते १७:१२
गुल्मी, ७ चैत । गायिका ललिता पौडेलको दोष सार्वजनिक भएको छ । लोक तथा दोहोरी क्षेत्रबाट संगीतको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको गायिका ललिता पौडेलले हालै बजारमा नयाँ एकल गीति संग्रह ‘दोष भाग २’सार्वजनिक भएको छ ।
कलाकारलाई अवार्डमा भन्दा रकममा नजर